बुढानिलकण्ठ न= पा= १०, ज्योतिनगर, कपन, काठमाडौं
मिति २०७५ पौष ३० गते
राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रथम राष्ट्रिय परिषदको बैठक २०७५ पौष २७ र २८ गते बुटवलमा भव्यरुपमा सम्पन्न भएको छ । यो पार्टीको नियमित बैठक हो । यो बैठकले तात्कालिक राजनैतिक प्रस्ताव र संगठनात्मक कार्यक्रम पारित गरेको छ । साथै एक दिनको देशव्यापी विरोधसभाका कार्यक्रम पनि बनाएको छ । परिषदका यी निर्णयहरुलाई सार्वजनिक गर्न यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. पारित तात्कालिक राजनैतिक प्रस्तावमा राजतन्त्रको अन्त भै गणतन्त्रको स्थापना भए पनि देशको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा परिवर्तन भएको छैन भन्दै त्यो अवस्थामा आमुल परिवर्तनको आवश्यकता छ, भनिएको छ । तर त्यसका लागि आवश्यक परिस्थिति परिपक्व भएको छैन । संविधानसभाद्वारा निर्मित नया“ संविधान नेपालको राजनैतिक इतिहासमा ठूलो उपलब्धि हो । यसको मुख्य उपलब्धि गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, जनताका मौलिक हक, एकल नेपाल राष्ट्र, राष्ट्रियता, बहुलवाद, संविधानको सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण, प्रेस स्वतन्त्रता इत्यादि हुन् । यिनको रक्षा र उपयोगगर्दै अधिकतम लक्ष्यतर्फ अघि बढ्न पर्दछ । तर, संघीयता र नागरिकतासम्बन्धी खुकुलो नीति सही छैनन् ।
२. यो संविधानको र अन्ततः गणतन्त्रको विरुद्ध जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी, विखण्डनकारी, राजावादी, भारतीय विस्तारवाद र प्रकारान्तरले वामपन्थी संर्किणतावादीहरु लागेका छन् । नेपाली कांगे्रसभित्र देखापरेको धर्म निरपेक्षताको विरोधले हिन्दु धर्म सापेक्ष राज्य स्थापना हुन सक्ने र त्यसआधारमा राजतन्त्रको पुनस्थापना हुने खतरा छ । भारतमा हिन्दु धर्मवादी भाजपाको सरकारले पनि नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाई त्यस आधारमा राजतन्त्र पुस्थापना गर्न चाहन्छ । त्यसकारण गणतन्त्रमाथि खतरा छ ।
३. अहिलेको नेकपाको सरकारलाई हाम्रो समर्थन छ । तर, यो सरकारले परिवर्तित राजनैतिक स्थिति र निर्वाचनमा पाएको जनताको अभिमतको आधारमा काम गर्न सकेको छैन । देशमा भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, महंगी, करवृद्धि, हत्या, हिंसा, बलात्कार, दण्डहीनता, जनशक्तिको विदेश पलायन, अर्थतन्त्र, सामाजिक सुरक्षाको स्थितिमा सधार भएको छैन । अर्थात जनताले अनुभूत हुनेगरी सरकारले काम गर्न सकेको छैन । त्यसैले उपरोक्त कुराहरुको विरोधमा आगामी माघ १९ गते देशव्यापी जिल्लास्तरमा विरोध सभाहरु गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसको मूलनारा “संघीयता, राष्ट्रिय विखण्डन र प्रतिगमनको खतराका विरुद्ध संघर्ष गरौं ! महंगी, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा र वलात्कारको अन्त्य गरौं !!” ठेगान गरिएको छ । विरोध सभाका मुख्य वक्ताहरु निम्नानुसार ठेगान गरिएको छ– काठमाण्डौं– चित्रबहादुर केसी, प्युठान– रश्मीराज नेपाली, नवलपरासी– बद्रे आलम, कैलाली– दुर्गा पौडेल, बाग्लुङ– जनकराज शर्मा, सुनसरी– हिमलाल पुरी, बा“के– ओमबहादुर केसी, कंचनपुर– मनोज भट्ट, डडेल्धुरा– बेणीमाधव जोशी, डोटी– लालबहादुर जाग्री, सुर्खेत– तारा जिसी, दैलेख– लोकेन्द्र लम्साल, बर्दिया– कमला जिसी, दाङ– विमल पोखरेल, कपिलवस्तु– झविलाल थापा, रुपन्देही– भैरव रेग्मी, अर्घाखा“ची– मीना पुन, पाल्पा– तारा थापा, गुल्मी– सोम कार्की, रोल्पा– कृष्ण खड्का, स्याङजा– रामबहादुर बुढा, कास्की– राजेन्द्र ढुंगाना, नवलपुर– डम्मर पुरी, तनहु“– निमबहादुर बुढा, चितवन– रामप्रकाश पुरी, मकवानपुर– सरस्वती पौडेल, ललितपुर– घनश्याम न्यौपाने, सिन्धुपाल्चोक– लक्ष्मी केसी, काभ्रे– नारायण सापकोटा, सर्लाही– काजीलाल वाइवा, रौतहट– कर्ण थापा र बारा– चिन्तामणी पौडेल । अन्य बा“की जिल्लाहरुमा प्रदेश समितिहरुले मुख्य वक्ताहरुको ठेगान गर्ने छन् ।
४. बैठकले संगठन विस्तारको लागि योजना बनाएको छ । त्यो योजना अनुसार राष्ट्रिय जनमोर्चाको सदस्यता वितरण, समितिहरुको गठन पुर्नगठन, भेला, सम्मेलन, प्रशिक्षण, कार्यकर्ताको संरक्षण, संगठनको अनुगमन, मूल्याङ्कन, जिम्मेवारी, जनप्रतिनिधिहरुको परिचालन, विकाश निर्माणका काम आदि विभिन्न विषय र क्षेत्रमा काम हुनेछ ।
५.बैठकले समसामयीक विषयमा विशेष प्रस्तावहरु पनि पारित गरेको छ । ती यसप्रकार छन –
क) विश्वमा विवादास्पद र बदनाम भएको युनिर्भसल पिस फेडरेशनको काठमाडौंमा केही समय अगाडि एसिया प्यासिफिक समिट भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री के.पी. ओली आफूमात्र सहभागी भएनन्, उक्त कार्यक्रमको नेपाल सरकार सहआयोजक बन्यो र राज्ययन्त्रहरुलाई त्यसमा परिचालन गरे । धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको सरकारको यो कार्य सहि भएन । सरकारको यसप्रकारको कार्यले देशमा इसाइकरणको खतरा पनि बढेर गएको छ । राष्ट्रिय परिषदको बैठकले सरकारको यस्तो कार्यको घोर विरोध गर्दछ ।
ख) परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति र नया“ सरकार बनेपछि पनि देशमा भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, घुसखोरी जस्ता अपराध र विकृतिमा कुनै कमि आएको छैन । वाईडबडी हवाईजहाज खरिदगर्दा घोटाला भएको छ । आयल निगममा भएका भ्रष्टाचारहरु बाहिर आएका छन् । भ्रष्टाचारमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेता कार्यकर्ता संलग्न भएका छन् । स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचार भएको छ । यो राष्ट्रिय परिषदको बैठकले यसप्रकारको भ्रष्टाचारको तीव्र विरोध र भत्र्सनागर्दै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
ग) देशमा उद्योग, कलकारखाना तथा व्यापारको विकाश भएको छैन । देशको अर्थतन्त्र चौपट छ । जनता गरीब छन् । यस्तो मुलुकमा हाम्रो देशको लागि अनुपयुक्त, अनावश्यक र गलत संघीय व्यवस्था लादिएको छ । संघीय व्यवस्थाको अनावश्यक खर्च धान्न करमा व्यापक बृद्धि गरिएको छ । यो कर तिर्न उद्यमी, व्यापारी र सर्वसाधारण जनता सक्षम छैनन् । यो बैठक सरकारले गरेको यो करबृद्धिको विरोध गर्दछ ।
घ) नेपाल एकल राष्ट्रिय देश हो । संविधानले यो आधारभूत कुरा स्वीकार गरेको छ । त्यसकारण, संघीय शासन व्यवस्था हाम्रो देशको लागि सही व्यवस्था होइन । यो व्यवस्था नेपाली जनता र यहा“का राजनीतिक दलहरुको माग पनि होइन । यो विदेशी नेपाल विरोधी शक्तिहरुले नेपालमा लादिदिएका हुन् । यसले देशमा अनावश्यक खर्चमा बृद्धि भएको छ, जातीय, क्षेत्रीय द्वेष बढाएको छ, राष्ट्रिय विखण्डनको खतरा छ । यो संघीयतालाई चाडोभन्दा चाडो खारेज गर्न यो बैठकले जोडदार माग गर्दछ ।
ङ) लुम्बिनी र निजगढमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विमानस्थलहरु बन्दै छन् । तिनको लागि पहिले भारतले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि रुट परमिट दिएको थियो । अहिले विभिन्न बहाना बनाई उक्त रुट परमिट नदिने भनेको छ । भूपरिवेष्ठित देशले सामुन्द्रीक पहुचको सुविधा पाउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा व्यवस्था छ । भारतले नेपाललाई अहिलेसम्म त्यो सुविधाबाट बञ्चित गरेको छ । भारतको त्यो व्यवहारले नेपालको विकासमा धेरै नै बाधा पुगेको छ । अहिले आएर अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ रुट परमिट नदिएर नेपाल र नेपालमाथि एक मित्रको होइन कि शत्रुताको व्यवहार गरेको छ । भारतले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुट नदिने कार्यको बैंठकले घोर विरोध र भत्र्सना गर्दछ ।
च) नेपाल दुई विशाल भूभाग र जनसंख्या भएका भारत र चीनका बीचमा अवस्थित छ । नेपाल आफैमा सानो, पर्याप्त जनसंख्या भएको र अविकसित अवस्थामा छ । यस्तो देशको नागरिकता नीति कडा हुनु पर्दछ । तर, गैर नेपाली जनसंख्या देशमा थपिंदै गएको छ । विशेषगरी त्यो जनसंख्याले तराईमा ठूलो समस्या खडा हु“दै गएको छ । त्यसले नेपालको राजनीतिमा पनि प्रभाव पारेर नेपाल फिजीकरण हुने गम्भीर खतरा छ । सरकारको नागरिकता नीति खुकुलो पार्ने प्रस्तावित राष्ट्रहित विरोधी नागरिकता विधेयकको यो बैठकले विरोध गर्दछ र त्यसलाई संसदमा प्रस्तुत नगर्न सरकारस“ग जोडदार माग गर्दछ ।
छ) २ नं. प्रदेश तराईका जिल्लाहरुबाट निर्माण गरिएको छ । एकातर्फ, त्यो प्रदेशलाई पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका श्रोत–साधन उपलब्ध छैनन् भने त्यसदेखि उत्तरतर्फका पहाडी जिल्लाहरुलाई तराईका श्रोत–साधन उपलब्ध छैनन् । अर्कोतर्फ, भारतीय विस्तारवाद र राष्ट्र विखण्डनकारी तत्वहरुलाई पहाडी भूभागबाट अलगगरी एक मधेश प्रदेश निर्माण गर्ने वा राष्ट्रिय विखण्डनको लागि आधार क्षेत्र भएको छ । त्यसकारण २ नं. प्रदेश उत्तर चीनसम्मका पहाडी जिल्लाहरु मिलाएर निर्माण गर्न यो बैठकले माग गर्दछ ।
ज) अति विकट कर्णाली प्रदेश तराई भूखण्डनका श्रोत साधनबाट वञ्चित छ । त्यसकारण कर्णाली प्रदेशलाई उत्तर दक्षिण फैलाउन बा“के र बर्दिया जिल्लाहरुलाई पनि कर्णाली प्रदेशमा समावेश गर्न यो बैठकले माग गर्दछ ।
झ) माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना तथा अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना अति लाभप्रद, ठूला र राष्ट्रिय महत्वका परियोजनाहरु हुन् । यिनीहरुको निर्माण नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्नु पर्दछ र तिनलाई भारतलाई सुम्पने कुराको यो बैठकले विरोध गर्दछ ।
ञ) देशमा हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटनाहरु बढिरहेका छन् । त्यस्ता घटनामा पर्न सक्ने जनतालाई सुरक्षा दिन र त्यस्ता घटनाका दोषिलाई दण्ड दिन पनि राज्यले सकिरहेको छैन । यो बैठकले हत्या, हिंसा, बलात्कार, असुरक्षा र दण्डहिनताको अन्त्य गर्न मार्ग गर्दछ ।
ट) सीमा अतिक्रमणले नेपाली भूभाग गुमेको छ । कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थ्तििले राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकतामा गम्भीर खतरा छ । सीमा अतिक्रमण रोक्न, अतिक्रमित जमिन फिर्ता गर्न र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न यो बैठकले माग गर्दछ ।
६.शोक प्रस्ताव –
गण्डकी प्रदेशसभाका बाग्लुङ निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (ख) बाट निर्वाचित सांसद तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा बाग्लुङ जिल्ला समितिका पूर्वसदस्य टेकबहादुर घर्तीको २०७५ मंसीर २७ गते भारतको नया“ दिल्लीमा कलेजोसम्बन्धी रोगको उपचारको क्रममा निधन भएको छ । श्री टेकबहादुर घर्तीले देश, जनता, पार्टी र क्रान्तिको पक्षमा पुराउनु भएको योगदानको सम्मानगर्दै उहा“प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्दै यो बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गर्दछ ।